प्रलेस प्रतिभा पुरस्कार वासुदेव अधिकारीलाई | Nepali Sahitya Ghar – नेपाली साहित्य घर
Home समाचार कला / सहित्य प्रलेस प्रतिभा पुरस्कार वासुदेव अधिकारीलाई
on: आश्विन ६ , २०७७ मंगलवार- ०२:५२
५ आश्विन, काठमाडौँ ।
प्रगतिशील लेखक सङ्घको ६९ औँ स्थापना दिवस तथा प्रलेस प्रतिभा पुरस्कार–२०७७ अर्पण समारोह सम्पन्न भएको छ । नेकपा (माले) का महासचिव सी.पी. मैनालीको प्रमुख आतिथ्यतामा वरिष्ठ साहित्यकार वासुदेव अधिकारीलाई प्रलेस प्रतिभा पुरस्कार प्रदान गर्दै २०७७ असोज ५ गते भर्चुअल माध्यमबाट सो कार्यक्रम सम्पन्न भएको हो ।
कार्यक्रममा प्रमुख अतिथिको आसनबाट मन्तव्य राख्दै प्रमुख अतिथि मैनालीले नेपाललाई चिनेर लेख्न साहित्य रचना गर्न प्रगतिशील लेखक तथा साहित्यकारसित आग्रह गर्नुभयो । लामो समयदेखि नेपालको सार्वभौमिकता र भौगोलिक अखण्डता संवेदनशील रहिरहेकाले यहाँको राजनीतिक परिवर्तनबाट सार्थक परिणाम हासिल हुन नसकेको उहाँको दावी थियो । उहाँले यही कारणले नेपालका राजनीतिक परिवर्तन वैदेशिक हस्तक्षेपसहितको हुने गरेको उहाँको ठहर थियो । यस खालको वास्तविकतालाई मध्यनजर गरेर कलम चलाउन उहाँले आग्रह गर्नुभयो ।
अहिलेसम्मको राजनीतिक परिवर्तनले प्राप्त गरेका अधिकार पनि व्यवहार लागु नभएको भन्दै उहाँले त्यसको पक्षमा कलम चलाउन प्रगतिशील साहित्यकारलाई आग्रह गर्नुभयो । खासगरी रूढीवादको विरुद्ध तथा मिहिनेतकस र सीमान्तकृत समुदायलाई आवाज दिने गरी लेख्न उहाँले आग्रह गर्नुभयो । उहाँले नेपालमा सामन्तवाद अझैसम्म नसिद्धिएको पनि बताउनुभयो ।
विशिष्ट अतिथि पूर्वमन्त्री तथा प्रलेसका सल्लाहकार शान्ता मानवीले प्रगतिशील संस्कारयुक्त समाज निर्माणका लागि प्रगतिशील साहित्यले लगातार भूमिका खेल्दै आइरेको बताउनुभयो । अहिलेसम्म रचना गरिएका प्रगतिशील साहित्यलाई जनताको बस्ती बस्तीमा पुर्याउन प्रगतिशील लेखक सङ्घले भूमिका खेल्नुपर्ने आवश्यकतामा पनि उहाँले जोड दिनुभयो ।
प्रलेसका केन्द्रीय अध्यक्ष प्रा.डा. जीवेन्द्र देव गिरीको अध्यक्षता तथा महासचिव समीर सिंहको सञ्चालनमा अघि बढेको उक्त कार्यक्रमको उद्घाटन प्रमुख अतिथि मैनालीले ब्यानर पढेर गर्नुभएको थियो ।
पुरस्कार चयन प्रक्रिया तथा पुरस्कृत प्रतिभा वासुदेव अधिकारीको बारेमा केन्द्रीय उपाध्यक्ष सुशीला प्रधानाङ्गले मन्तव्य राख्नुभयो । प्रमुख अतिथि मैनालीले साहित्यकार वासुदेव अधिकारीलाई दश हजार नगद र सम्मानपत्र प्रदान गरिएको घोषणा गर्नुभयो । सम्मानपत्रको ब्यहोरा केन्द्रीय सचिव प्रकाश थापा मगरले वाचन गर्नुभएको थियो ।